Mounted police are police who patrol on horseback (equestrians) or camelback. They continue to serve in remote areas and in metropolitan areas where their day-to-day function may be picturesque or ceremonial, but they are also employed in crowd control because of their mobile mass and height advantage and increasingly in the UK for crime prevention and high visibility policing roles. [Wikipedia]
Street Photography : eCigarette
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းအသက်တိုအောင် ဆွဲဆန့်ပေးမည့် eCigarette ။ Public area တွေဖြစ်တဲ့ Pub, Tube Station, Bus Station စတဲ့ နေရာတွေမှာ သောက်သုံးခွင့်ပေးထားတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း popular ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီပုံကတော့ လန်ဒန်ရဲ့ မြေအောက်ရထားဘူတာတစ်ခုမှာ သုံးစွဲနေတာကို တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Street Photography : Tottenham Court Road
Weekend တုိုင်း street photo အမြဲရိုက်ဖြစ်တဲ့ Tottenham Court Road :)
Street Photography : Ealing Common Station
Tripod ကို သယ်ရတာ မသက်သာဘူး။ Train station တွေမှာလည်း တစ်ခါမှ ထောင်မရိုက်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ စထောင်ပြီးရိုက်ရင် သေချာတာကတော့ station supervisor လာပြီး ရစ်မှာပဲ။ အဲဒီတော့ တခါတလေ handheld ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ပုံတွေက ရောင်းစားတဲ့အဆင့်မှ မဟုတ်ဘဲ။
Street Photography: Ealing Common Station
Burmese Culture Show at Oxford Town Hall
မတ်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၃ နေ့က Oxford Town Hall မှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Burmese Culture Show မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း နားအေးပါးအေး ဇိမ်ကျနေတာပဲ။ အိမ်မှာသောက်တော့ ပိုဈေးသက်သာတယ်။ Pub မှာကတော့ ဈေးလည်းပိုကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ Beer က ပိုပြီး fresh ဖြစ်တယ်။ သူ့အကြိုက် ကုိုယ့်အကြိုက်ပေါ့။ ကမ္ဘာမှာ စီးပွားတွေဘယ်လောက်ပျက်ပျက် အရောင်းသွက်နေဆဲ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဘီယာ၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်တို့က ထိပ်ဆုံးမှာ ပါနေဆဲပဲ။